Magaalattiitti tamboo xuuxuurratti adabbii eegaluuf hojjetamaa jira jedhame
Finfinnee: Barana, Magaalaa Finfinneetti to'annoo tamboo xuuxuurratti kaffaltii tajaajilaafi adabbii seeraa jiru keessatti haammachiisuun jijjiirama fiduuf hojjetamaa akka jiru Abbaan Taayitaa Bulchiinsaafi To'annoo Nyaataa, Dawaafi Kunuunsa Fayyaa Magaalattii ibse.
Daarektarri Olaanaa Abbaa Taayitichaa Obbo Geetaachoo Waratii waltajjii gamaaggamaa raawwii karooraa baatii ja'aa abbaa taayitichaa Wiixata galma Tiyaatira 'Hager Fiqiritti' geggeeffamerratti, magaalattiitti to'annoo tamboo xuuxuun walqabatee hanga ammaatti tarkaanfiileen seeraa fudhatamuu dhabuu akka hanqinaatti kan ka'u ta'uu eeraniiru. Kunis hojiilee hubannoo gabbisuurratti kan xiyyeeffatamaa ture ta'uu ibsaniiru.amaa turuu ibsaniiru.
Akka Obbo Geetaachootti, adeemsonni seeraan jiran tarkaanfiin seeraa akka fudhataamuf irra deebiin kaffaltii tajaajilaafi adabbii haammachiisuu raggaasisuu kan gaafatu ta'uufi kaunis adeemsarra akka jira. Yeroodhaaf tarkaanfii adabbiitti seenuu dhabuun akka hanqinaatti kan ka'u ta'uullee, barana sadarkaa federaalaarraa eegalee naannawaa hawaasnii itti heddummaatuutti tamboo xuuxuun dhorkaa akka ta'eefi dhaabbannii kana raawwachiisee argames adabbiin seeraa waan eegaluuf, magaalattiitti jijjiiramni ni dhufa jedhamee akka abdatamu himaniiru.
Torban kana/This_Week 12391
Guyyaa mara/All_Days 1821811